🌟CLEAN & BRIGHT🌟 amaminithi ukusuka edolobheni naseBrown - I-Airbnb
🌟CLEAN & BRIGHT🌟 amaminithi ukusuka edolobheni naseBrown
Uma uku-Providence ngeholide, ibhizinisi noma ingqungquthela, uthole indawo ekahle ongabiza isizinda sakho. Indlu isanda kulungiswa. Yesimanjemanje, ihlotshiswe kahle, ihlanzekile ngokukhanya kwelanga okuningi. Itholakala enhliziyweni ye-Federal Hill, eduze kwedolobha i-Providence.
• I-inthanethi esheshayo nethembekile
• Ukupaka KWAMAHHALA ngaphandle komgwaqo
• Amamayela angu-0.5 ukuya edolobheni le-Providence kanye ne-RI Convention Center
• Imayela elingu-1 ukuya e-RISD naseBrown University
• Imayela elingu-1 ukuya emkhosini we-WaterFire
Leli yigumbi lesimanje, elihlanzekile futhi elinethezekile endlini esanda kulungiswa, enhle yesimanje enokukhanya kwelanga okuningi.
Leli gumbi eliyimfihlo elibanzi liyindawo enhle yokuhlala kwakho e-Providence. Kulala ngokunethezeka okubili nombhede wosayizi wendlovukazi kanokusho, nokuthinta okuningi okukhethekile. Njengoba ufika, igumbi lakho lizobe likulindile - ngemva kokuhlanzwa ngokomsebenzi.
Leli gumbi lisesitezi sesi-2. Sicela uqaphele ukuthi uqasha Igumbi lokulala ELILODWA elingaphakathi kwendlu enkulu. Kunamakamelo okulala azimele amaningana endlini - iningi lawo lisetshenziswa ezinye izivakashi ze-Airbnb, ngakho-ke uzoba nobudlelwane obuhle. Uzoba nokhiye nokhiye wekamelo lakho lokulala, ukuze ukwazi ukukhiya lapho uhamba usuku (noma uma ulapho).
Zonke izindawo ezivamile ziyatholakala ukuze uzijabulele. Igumbi lokuhlala nekhona lekhofi linikeza indawo enhle yokuphumula ngemva kosuku lokuhlola i-Providence, ukuxhumana nezinye izihambeli okungenzeka zihleli ngesikhathi esifanayo, noma ukufunda incwadi nje.
Ikhishi lethu litholakala kuzo zonke izihambeli zethu ngekhofi netiye. Ungasebenzisa ifriji nazo zonke izinto zikagesi ngenkathi ulapha!
Kunamagumbi okugeza amabili agcwele endlini - nakuba abelwe zonke izihambeli, cishe asikho isikhathi sokulinda. Futhi zonke zihlanzwa ngokomsebenzi usuku nosuku.
4.92 · 338 okushiwo abanye
Indawo enhle futhi enomlando, iFederal Hill iyindawo enhle yokuhlala.
Indlu iqhele ngemizuzu emi-2 ukusuka e-Atwells avenue enezindawo zokudlela ezihamba phambili e-Providence. IDowntown cishe imizuzu eyi-10 ngokuhamba, kanti i-WaterFire ingaphansi kwekhilomitha!
Isikhathi esiningi, ngeke usibone esikhaleni ngenxa yezinye izibopho. Sikunikeza ngokungena nokuphuma ngokwakho ukuze kube lula kuwe. Kodwa-ke, sobabili asishayeli ucingo futhi sihlale sikujabulele ukusiza, ukunikeza iseluleko, noma ukusiza nganoma yini ezokwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kakhudlwana. Sicela ungangabazi ukufinyelela noma nini!
Isikhathi esiningi, ngeke usibone esikhaleni ngenxa yezinye izibopho. Sikunikeza ngokungena nokuphuma ngokwakho ukuze kube lula kuwe. Kodwa-ke, sobabili asishayeli ucingo futhi sih…